काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता नेपालले आयोजक राष्ट्र बनेर खेल सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो । गत आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साग खेलकाे औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरिन । ...
नेपालले दिएको १७३ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै श्रीलंका
नेपाल । १३ औं दक्षिण एसियाली (साग) पुरुष टि ट्वान्टी क्रिकेट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले श्रीलंकाविरुद्ध १७३ रनको लक्ष्य पस्किएको छ । टियु क्रिकेट मैदान, किर्तिपुरमा श्रीलंकाले टस जितेर पहिला फिल्ड...
एथलेटिक्समा सन्तोषी श्रेष्ठले जितिन् स्वर्ण पदक
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को एथलेटिक्समा नेपालले पहिलो स्वर्ण पदक जितेको छ । धाविका सन्तोषी श्रेष्ठले १० किलोमिटर दौडमा स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन् । सन्तोषीले भारतकी कविता यादवलाई प...
काठमाडौं । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा सरु लिम्बुको निर्णायक गोलसँगै नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले विजय सुरुवात गरेको छ । तेस्रो दिन मंगलबार भएको पहिलो खेलमा श्रीलंकामाथि १–० को नतिजा न...
रणनीतिक रुपमा असफल काँग्रेस नेतृत्व !
राजनीतिमा हार व्यहोर्नु नै भविष्यमा जित्नु या सफल हुनु ठानिन्छ तर यो उपनिर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका लागि सुहाउँदो कुरा मान्न सकिँदैन । ५२ वटा क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेकपाका लागि प...
काठमाडौं । बाग्लुङमा जीप दुर्घटना हुँदा १४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । मंगलबार बिहान १०.३० बजेको समयमा बा १ ज ५२१९ नम्बरको यात्रु बहाक जीप दुर्घटनामा परेको हो । १७ जना यात्रु बोकेको उक्त जीप पल्...
सागमा स्वर्ण : थाउलोमा ‘विजय र सुस्मिता’, दुवाथोलनमा ‘हिमाल टमाटा’
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत मंगलबार(तेस्रो दिन) उसुमा नेपालले थप दुई स्वर्ण पदक आफ्नो हात पारेको छ । उसुको थाउलोमा विजय सिञ्जाली र सुस्मिता तामाङले स्वर्ण पदक जितेका हुन् । ...
सागमा आज: एथ्लेटिक्सतर्फ टंकलाई कास्य
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तगर्त एथ्लेटिक्सतर्फ १५ सय मिटरमा नेपालले कास्य पदक जितेको छ । नेपालका टंक कार्कीले कास्य पदक जितेका हुन् । १५ सय मिटरमा प्रतिस्पर्धा ग...
पाँच महिनाको अवधिमा १३ हजार किलोमिटर किन हिड्यो यो बाघ ?
एजेन्सी । भारतमा एउटा बाघले सबैभन्दा लामो यात्रा गरेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । करिब साढे दुई वर्षको सो बाघले पाँच महिनाको अवधिमा १३ हजार किलोमिटर हिँडेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । भारतमा बाघले सबैभन्दा...
सागमा आज: १५ खेल, १७ स्वर्ण पदकका लागि
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तगर्त आज(मंगलबार) १७ स्वर्ण पदकका लागि १५ वटा खेल हुँदैछ । भलिबल तर्फ : मंगलबारदेखि भलिबल खेल सम्पन्न हुनेछ । दुईवटा स्वर्णका लागि फाइनल ...
एजेन्सी । अर्जेन्टिना तथा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले कीर्तिमानी छैटौं पटक बालोन डी’ओर अवार्ड जितेका छन् । उनले सन् २०१९ को उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै बालोन डी’ओर जितेका हुन् । फ्रान्...
पोखराको निर्वाचनमा धाँधली गरेको देउवाको आरोप
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पोखराको निर्वाचनमा सरकारले स्थानीय प्रशासन लगाएर धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार सानेपामा कांग्रेस नेता स्व.भीमबहादुर तामाङको ७ औं स्मृतिसभामा बोल्दै स...
पृथ्वीनारायण शाहको सालिक सिंहदरबारअगाडि नराखिएको भए…
तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक सिंहदरबारको मूल ढोका सामुन्ने नठड्याइएको भए कहाँ हुन्थ्यो होला ? वास्तवमा त्यो सालिकलाई त्यहाँ राख्ने शुरुको निर्णय नै थिएन । निर्णय थियो, ‘चन्द्रागिरिमा राख्ने ...
१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना डुबानमा पर्ने आरुघाट र खहरे बजारक्षेत्रको मुआब्जा तोकिएको छ । आयोजनाको डुबानमा पर्ने आरुघाट(विशालनगर) बजार क्षेत्रलाई नौ किसिम र खहरे बजार क्षेत्रलाई...
नेकपाले महत्वपूर्ण दुई स्थान गुमाउँदा कांग्रेसलाई फाइदा
प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका गरी ३७ जिल्लाका रिक्त ५२ पदमा शनिबार भएको उपनिर्वाचनमध्ये मुख्य स्थानमा नेकपाले आफ्नो स्थान गुमाएको छ । कुल ५२ रिक्त पदमध्ये संख्यात्मक रूपमा नेकपाले ३० स्थान...
१९ स्थानमा दशगजा गोलमाल
भारतीय सीमासँग जोडिएको दशगजा वर्षौंदेखि दुवैतर्फबाट अतिक्रमित छ । भारतीय पक्षले दशगजामा सरकारी भवन बनाएर सुरक्षाकर्मीसमेत रोखेको छ । नेपालीले पनि निजी घर र अन्य संरचना बनाएका छन् । इलामसँग जोडिएको भा...
तुइनबाटै कर्णाली वारपार
सरकारले देशलाई नै तुइनमुक्त घोषणा गरेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हुम्लावासी अझै आधा दर्जन तुइनमा तर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । कर्णाली नदीमाथि झोलुङ्गे तथा ट्रस ब्रिज निर्माण नगरिँदा हुम्लावासीलाई जोख...
दक्षिण एसियाली खेलकुदको दोस्रो दिन आज, नेपालले जित्यो १५ स्वर्ण
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली खेलकुद कुम्भ मेला १३औं सागमा हालसम्म नेपालले १५ स्वर्ण जितेकाे छ । आज(सोमबार) २४ स्वर्णको छिनोफानो हुँदा नेपालले करातेमा ७, तेक्वान्दाे पुम्सेमा ७, महिला ट्रायथलनमा १ गरी कु...
१३ औं साग प्रतियाेगिता: कराँते टिम कातामा पनि नेपालको स्वर्ण
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा नेपालले कराँते टिममा पनि नेपाल स्वर्ण पदक जित हात पारेको छ । सोमबार भएको खेलमा मन्डेकाजी श्रेष्ठ, प्रवीण मानन्धर र महसुस तामाङको टिमले स्वर्ण जितेको हो ...
खाना पकाइरहँदा ग्यास पड्कियो, एक व्यक्ति घाइते
काठमाडौं । काठमाडौंमा खाना पकाउने क्रममा ग्याँस सिलिन्डर पड्किँदा एक व्यक्ति घाइते भएका छन् । काठमाडौंको हाँडीगाउँ जोगीकुटी मार्ग डेरा गरी बस्ने भारत घर भएका १८ वर्षीय प्रदीप कुमार कुशवाह नाम गरेका ...